Nhetembo dzaGil de Biedma, hupenyu uye kupokana kwadzo | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Type, Nhetembo
Nhetembo dzaGil de Biedma.
Nhetembo dzaGil de Biedma dzinogara dzichitsvagwa pamambure. Kubata pachedu, kwekudyidzana uye kwepamoyo kwemashoko ake - musanganiswa une simba uye wakagadzirwa - wakagonesa hukama hwakadzama pakati pemudetembi uye nevateereri vakawanda venhetembo vanoda pasi rese pamusoro pemakore. Zvese izvi, hongu, kunyangwe hazvo vazhinji vasina kana kuziva nezvake achiri mupenyu.
Asi, ndiani aive Jaime Gil de Biedma? Nei izvi zvichikanganisa nhetembo dzeSpanish pakati pezana ramakumi maviri remakore uye kunyangwe muzana ramakumi maviri nerimwe. Isu tiri chigadzirwa chemamiriro ezvinhu, uye avo vakakomberedza hupenyu hwanyanduri uyu vakatendera nzvimbo yakakwana yekuberekesa kuti basa rake ripfuure uye haicherechedze chizvarwa chete, asi nyika yese. Kune izvo uye zvimwe anorangarirwa Zuva rega rega renhetembo muma intshi ese epasi.
1 Imwe maonero paJaime Gil de Biedma
1.1 Verenga nhetembo kana kuverenga mudetembi ...
1.2 «Zvinoitika mudetembo hazvina kumboitika kwauri»
1.3 Izvo zvinotaurwa pamusoro paGil de Biedma
1.4 Mukomana wemakore manomwe ekuberekwa ainakidzwa nekuverenga Don Quixote
1.5 Matambudziko nekuda kwekukonana, yunivhesiti, hushamwari
1.6 Kutanga kushanda
1.7 Nhetembo dzeChirungu, chinoshaikwa
1.8 Kupinda kwePhilippine Fodya Kambani, mabasa uye nehuviri hupenyu
1.9 Misoro yaGil de Biedma
1.11 AIDS uye mwenje unodzima
2 Nhetembo dzaGil de Biedma
2.1 Kusuruvara october husiku
2.3 Handichazove mudiki zvakare
2.4 Kuongorora Tom
2.6 Husiku hwemwedzi waJune
Imwe maonero paJaime Gil de Biedma
Verenga nhetembo kana kuverenga mudetembi ...
Kuverenga nhetembo kana nhetembo dzinoverengeka uye uchitenda kuti unonzwisisa hupenyu hwanyanduri, kutaura zvakafara - uye kutaura zvishoma - chiito chekushinga. Nekudaro, kuverenga hupenyu hwanyanduri, kubva panguva yaanogashira hana kusvika mweya wake wekupedzisira waenda, zvinopa, neimwe nzira, imwe simba rekutaura maonero maererano nezvairehwa nendima dzake.
«Zvinoitika mudetembo hazvina kumboitika kwauri»
Biedma pachake akatsigira "zvinoitika mudetembo hazvina kumboitika kune mumwe." Uye izvi hazvireve, sezvazviri, kuti hapana mutsvakiridzo wezviitiko mutsamba imwe neimwe, mundima yega yega, mudanho rega rega… kwete; zviripo, uye zviripo. Zvisinei, maonero ese emiti haakwanise kutariswa nemashizha awo achangoburwa, asi nemidzi yawo yakadzika, nehungwaru hunopfuura nepakati pehunde rekare rinorwisa uturu uye zvipembenene zvakawanda zvinokomberedza mwenje kadiki wechiedza wakapihwa pane imwe neimwe.
Izvo zvinotaurwa pamusoro paGil de Biedma
Zvinozivikanwa kuti Jaime Gil de Biedma akaberekerwa muBarcelona muna 1929. Akasvika musi waNovember 13, sezvakatsanangurwa negwaro rake rekuzvarwa. Vese vemasuo vanopindura kuti aibva kumhuri yakapfuma uye yedzinza uye kuti izvi zvine hukama chaihwo pahupenyu hwake. Kuti zvidzidzo zvake zvekutanga uye chikoro chepamusoro chakaitika kuNavas de la Asunción redzidzo nzvimbo, kutanga, uyezve kuLuis Vives General Studies centre.
Mukomana wemakore manomwe- uyo ainakidzwa nekuverengera Quixote
Martha Gil, hanzvadzi yake, akataura nemufaro mubvunzurudzo iyo Biedma, angori namakore manomwe ekuberekwa, "akaseka zvinonzwika achiverenga iyo Quixote". Nechekare izvi zvinogona kufungidzira zvishoma kuti paizova maari neimwe nzira kune mavara. Ngatiregei kutaura kuti zvaizozivikanwa kuti aizove mudetembi, asi kwaive nechido chekuverenga mabhuku, uye izvo zvainge zvatove zvakawanda.
Matambudziko nekuda kwekukonana, yunivhesiti, hushamwari
Zvakare kuti mukusimudzira kwayo yakatanga kuve neyakavapo dambudziko chigadzirwa chekuramba kuchiramba kune hwayo hupfumi uye kukwezva kusingadzoreke kune vakasarudzika nenzanga.. Aya mamiriro akawedzera kubva muna 1946, mushure mekupinda muUniversity yeBarcelona, ​​shanduko yakazotevera kuenda kuYunivhesiti yeSalamanca (kwaakapedza kudzidza mumutemo) uye mushure mekuverenga Marxism uye kutanga kuwirirana nepfungwa dzemakominisiti. Iyo iri muSalamancan yunivhesiti nharaunda uko Biedma inosangana nemhando dzakadai se:
Aya aive, hapana chimwezve uye hapana chakaderera pane vanyori vakapa hupenyu kune izvo zvinonzi "Chizvarwa che50". Muchikamu chakakosha, kwaive nekuda kwekuenderera mberi kwekutaurirana nemagweta aya nevakadzidza kuti pfungwa dzekunyora dzaBiedma dzakatora chimiro uye neruvara. Kubva pane vese, yaive naCarlos Barral waakasika naye kubatana kwakakosha uye kwaari kwaanotsaurira basa rake rekutanga Ndima kuna Carlos Barral (1952). Gare gare rinoburitsa Zvinoenderana nenguva yemutongo (1953).
Nhetembo dzeChirungu, chinoshaikwa
Pamusoro pezvinhu zvataurwa pamusoro apa, pane chimwe chinhu chinokonzeresa nhetembo dzaBiedma chisati chasvika fomu yekupedzisira. Chinhu ichi chinogumisira mumabatiro ake - uye chinoputika chisati chashambadza rake rechitatu basa - uye hapana mumwe asi kuyambuka kwekumanikidza kweBarcelonia nhetembo dzeChirungu. Yakadaro chiitiko inoitika mushure merwendo rwekuenda kuOxford (1953) uye neruoko rwaPaco Mayans, uyo anomusuma kuti averenge TS Eliot. Uku kusangana neveAnglo-Saxon vanyanduri kwakapa zvakasara uye zvakafanira nuance kubasa raBiedma.
Kupinda kwePhilippine Fodya Kambani, mabasa uye nehuviri hupenyu
Mushure meizvi - ndatopedza kudzidza uye nepeni isina chinhu mumabasa maviri apfuura, asi iyo yaiti inoshandiswa mune yekuwedzera nhetembo kuita -, Jaime akabatana nePhilippine Fodya Kambani (bhizinesi remhuri) mu1955. Panguva ino tinozviwana tiri pamberi pemurume wemakore makumi maviri nemanomwe ane huchenjeri hukuru, mudetembi ane mabhuku maviri ari mukati, ane hunhu hwepabonde hunorambwa nevevanhu, uye uyo, ari weboka reSpanish rine hunyanzvi, anonyemwerera uye anombundirana mazano.
Pasi peiyi panorama yezvinofungidzirwa kuti zvinopesana nekurambwa (uye netarenda risingarambwe chigadzirwa chehupenyu uye hutongi) inomuka imwe yemabasa akachena uye anomiririra enhetembo eSpain. mumakore achangopfuura.
Misoro yaGil de Biedma
Ndima dzake dzaitenderera nguva isingaregi, hupenyu hwezuva nezuva, uye sei - chaizvo - zvematongerwo enyika zvazvino hazvishande mukufarira vagari. Vakanga vaine uye vane kurira kwakanaka uye mutinhimira, saka vaimbi vazhinji vanovaimbira.
Kufunga kwake kwevechidiki kwakasiya musina kudzoka kuri pachena. Pasina kutaura nezverudo, izvo zvinoda kuzviratidza pasina mamask, nechinhu chaicho chinotyiwa nemunhu wese, asi icho munhu wese anacho uye anoda muchivande.
Hupenyu hwake hwakaramba huchiyerera pakati pebasa remhuri, kuenderera mberi kwake kunetsekana pamusoro pekupokana uye kudikanwa kwekugara kwake pabonde uye nhetembo yake nenzira yemahara.
Zvisinei, muna 1974, uye pashure basa zvibereko 8 mabhuku mabhuku, Biedma akadonha. Kunetsekana mupfungwa dzake kwakaratidzika mumuviri wake. Iko kukanganisa kwakange kwakadai zvekuti munyori akamira kunyora. Kurambwa kwaisangova kurwisa nzanga yaakatsanangura se "bourgeois", asi kurwisa kuruboshwe kufamba nesimba rayo shoma rekurwira kodzero dzevakadzingwa. Ipo izvo zvainge zvichisimudzwa, nechomukati akazvitongesawo akazviramba nekuda kwehupfumi hwake uye nekusatomborarama zvaanga achiedza kurwira.
AIDS uye mwenje unodzima
Sokunge kuti izvo hazvina kukwana, Jaime ane chirwere cheAIDS. Zvinonetsa zvakakomberedza chirwere ichi ndizvo zvinopedza hupenyu hwake. Kuonekwa kwake kwekupedzisira pamberi pevateereri kudzokorora basa rake kwakaitika kuResidencia de Estudiantes, kuMadrid, muna 1988.
Nekuda kwekunetseka kweAIDS, mudetembi akashaya musi waNdira 8, 1990. Yaiva muBarcelona, ​​uye aive nemakore makumi matanhatu.
Ndima kuna Carlos Barral (yemunyori, Orense, 1952)
Zvinoenderana nenguva yemutongo (1953).
Vokufamba navo (Barcelona: Joaquin Horta, 1959).
Mukuda Venus (1965).
Nhetembo dzapashure pekufa (1968).
Kunyanya kuunganidzwa (Seix Barral, 1969).
Yakanyanya kurwara dhayari yemunyori (1974), ndangariro.
Hunhu hwechiito (Seix Barral, 1975; 2nd edition: 1982).
Verbatim: Mitsara 1955-1979 (Critic, Barcelona, ​​1980).
Nhetembo anthology (Mubatanidzwa, 1981).
Jaime Gil de Biedma. Kukurukurirana (Aleph, 2002).
Zano rekutamba. Tsamba (Lumen, 2010).
Magazini 1956-1985 (Lumen, 2015).
Jaime Gil de Biedma. Kukurukurirana (Australia, 2015).
Kusuruvara october husiku
zvinoita kunge zvakasimbiswa kuti mwaka uno wechando
izvo zvinouya, zvichave zvakaoma.
mvura, uye hurumende,
musangano mukanzuru yemakurukota,
hazvizivikanwe kuti anodzidza here panguva ino
kana kodzero yekudzingwa,
kana kana zviri nyore, kusurukirwa mugungwa,
anongomirira kuti dutu ripfuure
uye zuva rinouya, zuva iro, pakupedzisira,
zvinhu zvinomira kuuya zvakaipa.
apo pandakaverenga pepanhau pakati pemitsetse,
Ndakamira kuti nditeerere kurova kwemoyo
kunyarara mumba mangu, hurukuro
vavakidzani vavete pasi,
runyerekupe rwese irworwo
pakarepo kuwana hupenyu
uye chirevo chayo pachayo, chakavanzika.
Uye ndakafunga nezviuru zvevanhu,
varume nevakadzi panguva ino chaiyo,
vakashamisika pamusoro pekunetseka kwavo zvakare,
nekuda kwekufungidzira kwake kuneta,
nekuda kwekushushikana kwako munguva ino yechando,
apo kunze kunonaya.
Pese pamhenderekedzo yeCatalonia inonaya
nehutsinye chaihwo, noutsi nemakore mashoma,
mafekitori anodonhedza, achivuza
mumashopu asina mwenje.
Uye mvura inodhonzera mbeu mugungwa
incipient, yakavhenganiswa mumatope,
miti, shangu dzakaremara, midziyo
kusiiwa uye zvese zvakasanganiswa
netsamba dzekutanga dzakaratidzira.
Husiku, uhwo hunogara husinganzwisisike,
anokutsamwisa — ruvara
yezvakaipa gin, ivo vari
maziso ako mashoma bichas.
Ndinoziva kuti iwe uchaputsa
vape kwauri. Uye pakurara
Kunge hure inorwara
Handichazove mudiki zvakare
Chikamu chedetembo naGil de Biedma.
Hupenyu ihwohwo hwaive hwakakomba
mumwe anotanga kunzwisisa gare gare
—Sevechidiki vese, ndakauya
kutora hupenyu pamberi pangu.
Siya mucherechedzo wandaida
uye siya kuombera
-Kuti vakwegure, vafe, ivo vaingova
izvo zviyero zvemitambo.
Asi nguva yakapfuura
uye chokwadi chisingafadzi chinosvika.
ndiyo chete nharo yebasa.
Kusurukirwa maziso, mukomana akashamisika
kuti ndakashamisika kutitarisa
mune iro diki repine sango, padhuze neChikoro cheTsamba
makore anopfuura gumi nerimwe apfuura,
ichiri groggy nemate uye jecha,
mushure mekunge isu vaviri takaumburuka hafu takapfeka,
neicho chakanyanya kusimba kwechiratidzo,
yakabatana nenyaya iyoyo,
chiitiko changu chekutanga cherudo rwakadzoserwa.
Dzimwe nguva ndinoshamisika kuti chii chakaitika kwauri.
Uye kana ikozvino muhusiku hwako padyo nemuviri
chiitiko chekare chinodzoka
uye uchiri kusora kutsvoda kwedu.
Saka zvinodzoka kwandiri kubva zvekare,
mufananidzo wemaziso ako. Tsananguro
pamusoro pezvose, zvinopesana nezvose
uye pamusoro pangu, zvakare
—Pamusoro pezvose, fara-
Ini ndinotora chisarudzo icho zvakare.
Asi zvinopfuura chinangwa chekugadzirisa
kurwadziwa kwemwoyo kunogara.
Husiku hwemwedzi waJune
humwe husiku muna Chikumi wegore iro,
zvinenge zvisina kujeka, zvekuyaruka kwangu
(yaive mumazana gumi nemapfumbamwe zvinoita kwandiri
makumi mana nemapfumbamwe)
nekuti mumwedzi iwoyo
Ini nguva dzose ndainzwa kunetseka, kushushikana kudiki
zvakafanana nekupisa kwakatanga,
iro rakakosha ruzha rwemhepo
uye isina kunyatsoita hunhu.
Aive husiku husingarapike
Maawa echikoro chesekondari ari ega
uye bhuku risati rasvika
padyo neberere rakavhurika (mugwagwa
pazasi, pakati pemashizha akavhenekerwa)
pasina mweya wekuisa mumuromo mangu.
kubva kwauri, kure kure
husiku hwemwedzi waJune, kangani
misodzi yakauya mumaziso angu, misodzi
zvekuve kupfuura murume, zvandaida zvakanyanya
kana kurota kuzvitengesa kune dhiabhori,
hupenyu hunotibata nekuti chaizvo
Haisi iyo yatakatarisira isu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo dzaGil de Biedma
Agnes uye mufaro
Juan Eslava Galán. Kuongororwa kwemabhuku ake enhoroondo uye enganonyorwa